Qoraal+Sawir:- Bohosha Yaaqkumaan ee Baydhabo, oo daad ku soo rogmada yaa dilay gabar qaangaar ah xili ay ku sii jeeday gurigooda oo ku yaala Xaafadda Daarasalaam Arbacadii. | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Qoraal+Sawir:- Bohosha Yaaqkumaan ee Baydhabo, oo daad ku soo rogmada yaa dilay gabar qaangaar ah xili ay ku sii jeeday gurigooda oo ku yaala Xaafadda Daarasalaam Arbacadii.
written by Ateera 06/11/2019
Gabr 18 sano jir ah ayaa ku dhimatay roobabkii galabtan ka da’ay magaalada Baydhabo kadib markii uu daad ku qaaday Bohosha Yaaqkumaan oo dhanka bariga kaga began magaalada Baydhabo. Gabadha oo lagu magacaabi jiray Aamino Shariif Cali ayaa waqtiga uu daadka qaadayey waxaa ay ka timid beeraha waxaana la socday hooyadeed iyo walaasheed oo iyagana si dirqi ah ay ku badbaadiyeen dhalinyaro dhabbaha hayay oo ka yimid beeraha.
Roonoow Maxamed Aadan oo ka mid ahaa raggii soo helay gabadha maydkeeda isla markaana badbaadiyey gabadha hooyadeed iyo walaasheed ayaa Idaacadda Warsan u xaqiijiyey geerida gabadha uu qaaday daadka marayey bohosha Yaaqkumaan, isagoona intaas ku daray in xitaa iyaga toboneeyo ah ay garab qabsi uga soo baxeen bohosha oo waday biya aad u tira badan oo uu Roonoow sheegay in ay ka soo rogmadeen dhulka saree e xiga maanya fuulka.
Waxaa kaloo uu Roonoow sheegay in biyaha ku soo shubmaya Boholahan ay yihiin kuwo ay sababeen seera oodashada faraha badan ee dhulka saree ee Baydhabo, iyadoo qof waliba uu biya xireen ka sameeyey halkii uu deggannaa kadibna ay biyahii halkii ay mari jireen ka soo weecdeen kadibna ay ku soo shubmeen.
Waxaa caawa biya dartood looga guurayaa xaafado dhoowr ah oo ku yaala duleedka Baydhabo sida Xaafadda Horseed qeebteeda xigta Keeroow Foge, iyo Daaraslaamm iyadoo ilma yar la sheegayo in lagu la’yahay xaafadda Horseed oo reeraha halkaa deggan sheegayaan in ay cabsi ka qabaan in ay bohosha la tagtay, waxaan kaloo la soo warinayaa in Masaajidyo, Iskuulo, iyo gooba badan oo ganacsi uu daadka ka dhigay kuwo maran, sidoo kale Xoolaha la dhaqdo, Lo’da Ariga ay iayaguna daadka la tegay.
Halkan hoose ka dhagayso codka goob jooge Idaacadda Warsan uga waramay geerida gabadha.
Qoraal+Sawir:- Bohosha Yaaqkumaan ee Baydhabo, oo daad ku soo rogmada yaa dilay gabar qaangaar ah xili ay ku sii jeeday gurigooda oo ku yaala Xaafadda Daarasalaam Arbacadii. was last modified: November 6th, 2019 by Ateera